I-Green path, iflethi etofotofo, iCarataunas - I-Airbnb
I-Green path, iflethi etofotofo, iCarataunas
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJosefa
Ikwidolophana ethe cwaka nebukekayo, phakathi kwe Řrgiva nePampaneira, indawo ejikelezwe yindalo, apho uza kuva kuphela isandi seentaka kunye nokugcwala kwamanzi okuhlaziya njengoko udlula kwiibhaluni ezininzi kunye nemigxobhozo oza kuyifumana xa uhambahamba ujikeleze indalo. Le flethi inazo zonke izinto ezenza umntu angafuni ukuyeka nangona ekhangela indawo yasemaphandleni, kusasa ityeya enkulu ikumema ukuba ufumane isidlo sakusasa kunye nemisebe yelanga yokuqala.
Iflethi okanye indlu ekwicomplex evulekileyo netofotofo, amagumbi okulala amabini (ibhedi elala abantu ababini nebhedi encinci), iA/C kuwo onke amagumbi, indawo yokubasa umlilo, ifenitshala entsha kunye nezixhobo zombane, ityeya enkulu, indawo yokujonga iintaba, ilifti, indawo yokupaka kwigaraji yasekuhlaleni.
ICarataunas yilali ethe cwaka enabemi abambalwa, phakathi kweOrgiva nePampaneira, apho unokonwabela indalo, indawo efanelekileyo yokunyuka intaba kunye nebhayisekile okanye ufunde uze uphumle.
I-Carataunas ngumasipala omncinci kummandla we-Alpujarras, inobude obuziimitha eziyi-800 kwaye yenye yeedolophana zokuqala ezimhlophe ezikwiinduli zaseSierra Nevada ezamkela iAlpujarras, liqela lezomthetho lase-Řrgiva. Ime kwithambeka elisezantsi eSierra Nevada, apho kunokubonwa khona ikhephu elingapheliyo kunye nolwandle. Ukusuka kwezinye iindawo zedolophu kunye neendawo ezikujikelezileyo unokonwabela ii-panoramas ezintle, yindawo efanelekileyo kwabo bafuna uxolo nokuzola. Kukho iindlela ezininzi zokunyuka intaba, isandi samanzi sihamba nawe xa uhambahamba, ilanga likhona ukususela ekuseni kwaye uza kumangaliswa kukubona ilanga layo elihle. Iidolophu ezikufutshane yiSoportujar, iBayacas neCañar kodwa ke Řrgiva nePampaneira zikumgama wemizuzu embalwa xa uhamba ngemoto. ICosta Tropical kunye namalwandle ayo abanzi ikumgama wemizuzu eyi-35/40 xa uhamba ngemoto, ikomkhulu iGranada kubalulekile ukuba ungalibali ukutyelela uze wonwabele izikhumbuzo zayo ezingafaniyo.
Inqaku elithile yiCawa yaseSt. Mark, eyayibizwa ngokuba yiChurch of Our Lady of Peace, eyaqala ukusebenza ngo-1580 yaza yaphela ngo-1617.
Akukho nkcazelo inokuthenjwa yesiseko seCarataunas, nangona sinokuyitshintsha ngelinye ixesha ukusuka kulawulo lwamaSilamsi lwase-peninsula, ngexesha lama-Arabhu-Andalusian, kuba igama layo livela kwigama lesi-Arabhu iCaratamuz eliyindawo enokuzola, ikwathetha "umhlaba wecawa" ngenxa yeendawo zokugcina ezikhoyo apha kulo mhlaba.
Umbuki zindwendwe ngu- Josefa
Inombolo yomthetho: VFT/GR/05289
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Carataunas